Carruurta iyo dhalinyarada
Carruurta & DhallinyaradaActuellement sélectionné
Da’ yar kali socod ah
Hab waxbarasheed iyo layli
Lacag, qorsheeyn-lacag iyo qaansheegad
Hoowlo iyo waqti firaaqo
Daryeel-caafimaadeedka iyo daryeel-bukaanka
Khamro, sigaar iyo maandooriyo
Boggan waxa uu ka koobanyahay warbixin ku saabsan xarumaha xannaanada caafimaadka carruurta, qaabilaadda dhalinyarada iyo xannaanada carruurta iyo weliba heshiiska caalamiga ah ee carruurta, wakiilka carruurta iyo BRIS (Xuquuqda carruurta ee bulshada).
​Heshiiska caalamiga ah ee carruurta
Qiyaastii waddamada oo dhan waxa ka jira xeerar iyo sharciyo difaacaya carruurta iyo dhalinyarada. Carruurta iyo dhalinyarada Iswiidhan waxa difaacaya sharciyo caalami ah iyo qaar heer qaran ah labaduba.
Iswiidhan waxa ay saxeexday heshiiska carruurta ee qaramada midoobay. Konvention waa xeerar ay waddamo badani ku heshiiyeen. Heshiiska caalamiga ah ee carruurta waxa ku jira sharciyo difaacaya xuquuqda bina aadanka ee carruurta.
Xuquuqda carruurta ee bulshada – BRIS
Carruurta u baahan in ay la hadlaan qof weyn, waxa ay soo wici karaan BRIS (Xuquuqda carruurta ee bulshada). BRIS waa urur caawiya carruurta iyo dhalinyarada werwersan ama dhibaato qaba. Waa bilaa lacag la telefoon loo diro BRIS. Lambarka telefoonka BRIS ee ah 116 111 waxa soo wici kara dhammaan carruurta ka yar 18 jir ayagoo oo qof weyn kala hadli doona wax kasta. Waa bilaash. Lambarkaaga lagama arkayo telefoonada BRIS. Sidoo kale lagama arkayo biilka telefoonka ciddii BRIS soo wacday. Dhinaca midig ee boggan waxad ka arkaysaa xiriirka internetka ee bogga BRIS.
Xannaano carruureed waxa lagu magacaabaa meelaha ay carruurto joogto maalintii marka waalidku shaqaynayaan ama waxbaranayaan, tusaale ahaan xaddaanaa, qoysaska carruurta guriga ku haya iyo guryaha wakhtiga firaaqada. Marka waalidku shaqaynayaan ama waxbaranayaan waxay carruurtu xaq u leeyihiin xannaano. Waalidiinta shaqo raadiska ah ama ilmo kale fasax ku ah, waxay xaq u yeelan karaan xannaano. Xannaanada carruurta waxa maamula degmada laakiin waxa kale oo jira xannaanooyin barayfad ah. Carruurta u dhaxaysa 1-5 sano waxay xaq u leeyihiin in ay tagaan xannaano ama qoys guriga ku haya. Haddii aad shaqo raadis tahay ama aad ilmo kale guriga ku hayso waxa aad xannaanada xaq u leedahay 3 saacadood maalintii ama 15 saacadood wiiggii.
La xiriir degmadaada si aad wax dheeraad ah uga ogaato xannaanada carruurta ee meesha aad degentahay.
Xarunta xannaanada caafimaadka carruurta, BVC
Xarunta xannaanada caafimaadku, BVC, waxay caawisaa waalidiinta. BVC-ga waxa aad ku heli kartaa tilmaamo ku saabsan korriinka, naas-nuujinta, cuntadada iyo cudurada. Marka aad ka soo baxdo qaybta umusha, waxad adiga laftaadu la xiriiri kartaa BVC si aad u go´aamisaan wakhtiga kulanka koowaad. Kulanka koowaad wuxu badiyaaba ka dhacaa guriga. Markaa kalkaalisadu waxay ka warbixinaysaa BVCga, ilmaha caafimaadkiisana way fiirinaysaa.
Carruur iyo magangelyo
Wakiilka carruurta (BO)
Xuquuqda carruurta ee bulshada (BRIS)